Fahasalamana | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Ny menaka "Levomekol" mandritra ny fitondrana vohoka
Miaraka amin'ny fahazoana ny satan'ny vehivavy bevohoka vaovao, ny firaisana ara-nofo tsara kokoa dia mamerina mijery ny fomba fiainany. Noho izany, ny ankamaroan'ny reny miandry vohoka dia manomboka manara-maso manokana ny sakafo mahavelona sy ny fiadanany. Na izany aza, toy ny ...
Sigara elektronika "Pons": torolàlana momba ny fampiasana, endri-javatra, hevitra
Betsaka ny mpifoka, maniry ny hahatonga ny fahazarany ho azo antoka ho an'ny tenany sy ny hafa, mitodika any amin'ny fitaovana elektronika. Amin'izao fotoana izao, ity fomba tsy dia mahazatra loatra ity dia nanjary nalaza kokoa. Tena tsara ...
Aiza no hahazoana fitsaboina ara-pitsaboana amin'ny asa? Fahasamihafana eo amin'ny toeram-pitsaboana ankapobeny sy tsy miankina
Androany, maro no tsy mahalala hoe aiza no hanaovana fizahana fitsaboana amin'ny asa. Raha ny marina dia safidy roa ihany no mendrika: ny tobim-pahasalamana ho an'ny daholobe sy ny tobim-pitsaboana tsy miankina. Momba ny tobim-panjakana dia samy manana ...
Hozatry ny faran'ny ambany amin'ny olona iray: firafitra, fiasa
Ny rantsana ambany (tongotra) dia mitondra enta-mavesatra somary lehibe. Ny asan'izy ireo dia ny fanomezana hetsika sy fanohanana. Ny hozatry ny tendrony ambany, ny anatomia izay ho faritana amin'ny antsipiriany ao amin'ilay lahatsoratra, dia heverina ho mahery indrindra ...
Ny fanafody "Raunatin": inona no manampy? Famaritana ny toetra sy ny firafitra
Matetika, aorian'ny fizahana, ny dokotera dia manome ny fanafody "Raunatin" ho an'ireo marary. Inona no fanampiana avy amin'ny zava-mahadomelina ary inona no tafiditra ao amin'ny firafiny? Amin'ny tranga inona dia ilaina ny mihinana pilina ary afaka manao fitsaboana ...
Fahasalamana akaiky: mahatonga ny rà eo amin'ny fadimbolana
Ny vatan'ny vehivavy dia tena mahaliana sy be pitsiny. Noho ny fihary hormonina dia misy fiovana ao aminy isam-bolana. Ny fahamarinan-toerana amin'ny bisikileta dia manondro ankolaka ny fahasalaman'ny firaisana ara-nofo tsara kokoa. Matetika anefa ny vehivavy dia tsy maintsy mitodika any ...
Tomography fihenan'ny loha: famakafakana momba ny fomba fiasa
Tsy azo atao foana ny manao diagnostika mifototra amin'ny fitarainan'ny marary irery, indrindra raha voamarina avy amin'ny rafi-pitabatabana ny olana. Ny tomograpia (tomogram) an'ny loha dia mamela ny famotopotorana ny toe-pahasalamany. Ity dia iray amin'ny…
Ny fitsirihana ny ra immunological (immunogram): fanondroana, endri-panatanterahana, fanodinana
Ny fitsapana ny ra fanefy dia fomba iray ampiasain'ny manampahaizana manokana momba ny fitsaboana hamaritana ny fahafahan'ny vatan'ny marary iray manohitra ireo aretina mikraoba sy virosy mahery vaika. Ny valin'ny Diagnostika dia mamaritra ny haavon'ny fiarovana fiarovana, ny fanombanana ny kalitao ary ...
Fanafody fitsaboana: fanazaran-tena ho an'ny hernia ny hazondamosin'ny tsinay. Inona no tokony ho fanaovana gymnastika miaraka amin'ny hernia ny hazondamosin'ny ati-doha?
Ny hernia vozon-tranonjaza dia iray amin'ireo aretina mampidi-doza indrindra ateraky ny enta-mavesatra mahery tsy mitovy amin'ny vatana. Ny soritr'aretin'ity aretina ity dia saika mitovy amin'ny marary rehetra. Manomboka mahatsapa fanaintainana eo amin'ny hatoka, loha ... ny olona iray ...
Anticholinergika: lisitra. Ny fomba fanaon'ny fanafody antikolinergik
Ny fanafody anticholinergika dia zava-mahadomelina manakana ny asan'ny mpanelanelana voajanahary, acetylcholine, amin'ny receptor cholinergic. Amin'ny literatiora vahiny, ity vondrona fanafody ity dia antsoina hoe "deliriants" noho ny fahafahany miteraka delirium. ...
Ny zava-mahadomelina "Resorcinol": torolàlana momba ny fampiasana
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny fitsaboana "Resorcinol"? Ity ambany ity ny torolàlana momba ny fampiasana, ny sary ary ny fampiasa an'io fanafody io. Composition, forme vita amin'inona no resorcinol? Ny torolàlana momba ny fampiasana dia milaza fa ity akora ...
Inona no atao hoe encephalopathy hypertensive? Niteraka, aretina, fitsaboana
Ny ischemia cerebral, ny kapoka, ny aretim-po ary ny encephalopathy dia raisina ho aretina lehibe indrindra. Maty matetika izy ireo. Anisan'ireo be dia be ny aretin-tsaina ao amin'ny ati-doha, dia tokony hojerena manokana ny encephalopathy. Vondron'aretina maro be ity. Mampiavaka azy ireo ny ...
Obninsk, Foibe fanarenana: famaritana, manam-pahaizana manokana, serivisy ary hevitra
Ny fahasalaman'ny olombelona no ho lohalaharana foana. Amin'izao fotoana izao, maro no mihevitra fa efa ela ny fitsaboana ny fanjakana no mahasoa ny fampiasana azy io. Ny marary toy izany dia aleony mankany amin'ny hopitaly tsy miankina. ...
Ny fanafody "Biltricid": analogies, torolàlana ary hevitra momba ny fitsaboana
Helminthiasis dia mampidi-doza ary, indrisy, olana mahazatra mahazatra izay, raha tsy misy ny fitsaboana, dia mety hiteraka korontana. Ny fitsaboana dia manolotra fanafody voajanahary izay afaka manadio ny vatana katsentsitra. Ny iray tamin'izy ireo ...
Senna dia ahitra manana fananana mahasoa maro.
Ny senna ahitra amin'ny fanafody dia ampiasaina amin'ny fanafody folk ho fanafody fitohanana, ary koa amin'ny famongorana ireo pathologies izay mitaky fivalanana malefaka sy fanariana mora ny tsinay avy amin'ny diky. Manondro ny ...
Fitsaboana vonjy maika ho ny asidra bronchial. Ny zava-mahadomelina amin'ny asma bronchial
Ny asma Bronchial dia areti-mifindra mahazaka aretina izay miavaka amin'ny fanafihan'ny sempotra na sempotra. Ny ankizy sy ny olon-dehibe dia miseho io aretina io. Isan-taona ny isan'ny olona mijaly amin'ity patolojia ity dia mitombo. ...
Ny famafana amin'ny fo dia tsy maintsy atao manadihady mpinono.
Voamarikao ve fa manana tsiranoka avy amin'ny tratranao ianao? Tokony hatahotra ve ianao? Sa angamba tranga mahazatra tanteraka ity? Inona no aretina mety ho famantarana ny fivoahan'ny tratra? Ho an'ny ...
Fomba ahazoana menaka voaloboka. Ny tombony sy manimba ny menaka voaloboka
Nandritra ny an'arivony taona maro dia nahasarika ny sain'ny olombelona ny voaloboka. Voly amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao izy io ary tiana hatrany. Sarotra ny mahita zavamaniry hafa izay hohiraina matetika amin'ny tononkalo, angano, hira. ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 218 Next Page
61 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,348.